Apple wuxuu sii daayaa macruufka iyo iPadOS 15.1 RC ee Soosaarayaasha | Wararka IPhone
Apple wuxuu sii daayaa macruufka iyo iPadOS 15.1 RC ee Soo -saareyaasha
Kariim Hmeidan | 18/10/2021 21:12 | macruufka 15
Apple ayaa hadda nooga tagtay afkeenna oo furan kadib markii la soo bandhigay MacBook Pro -ka cusub oo leh M1 Pro cusub iyo M1 Max. Kumbuyuutarro cusub oo u yimid inay mar kale kacaan dunida xisaabinta ... M1 ayaa mar hore la yaabay, waxaad arki doontaa M1 Pro iyo Max. Laakiin wax walba ma noqonayaan Mac. Apple waxay sidoo kale rabtay inay soo bandhigto AirPods cusub iyo HomePods Mini cusub, intaas oo dhanna horumariyayaashu waxay mar kale shaqeeyaan tan iyo Cupertino hadda waxay siidaysay noocyada RC ee macruufka iyo iPadOS 15.1. Sii wad akhrinta aan ku siinayno dhammaan faahfaahinta noocaan cusub.
Sida aan had iyo jeer kuu sheegno, noocyadani waa kuwa horumariyaWaxay yihiin noocyo beta ah, in kasta oo ay gaaraan nooca Murashaxa Siidaynta, haddana waa betas. Siidaynta noocyadan waxay leedahay macne: ugu dhakhsaha badan waxaan awoodi doonnaa inaan ku aragno qoraallo deggan oo ku jira aaladahayaga. IOS iyo iPadOS 15.1 waxay horumar u keenaan aaladahayaga oo aan ka helno Soo noqoshada SharePlay, hawlgal cusub oo noo oggolaan doona wac asxaabtayada oo la falgal iyaga oo daawanaya filimada ama wada dhegaysiga muusikada. Iyada oo SharePlay, liisaska la wadaago iyo iswaafajinta barnaamijyada telefishinka ayaa soo laabtay si dhammaan ka -qaybgalayaashu ay isku mar u arkaan.
Intaa waxaa dheer, loogu talagalay dadka isticmaala iPhone 13 Pro, iOS 15.1 wuxuu noo keenaa taageero loogu talagalay duubista fiidiyowga ProRes (oo ku habboon tafatirka M1 Max -gaaga cusub), ku xaddidan 30fps at 1080p aaladaha leh "kaliya" 128GB ee kaydinta (kuwa kale waxay ku duubi karaan 4K); iyo sidoo kale suurtogalnimada in la joojiyo Auto Macro aad ugu dhowaanshaha walxaha. Wararka sidoo kale la socda hagaajinta cayayaanka caadiga ah ee ka dhigi doona macruufka 15 xitaa mid xasilloon. Nooca oo laga yaabo inaan ku arki doonno nuqul xasilloon toddobaadka soo socda ee la soco maadaama aan kugu soo wargelin doonno isla marka aan helno wararka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » macruufka » macruufka 15 » Apple wuxuu sii daayaa macruufka iyo iPadOS 15.1 RC ee Soo -saareyaasha
Jiilka 3aad AirPods waxay u baahan yihiin macruufka 13
Aqoonsiga codka ee HomePod wuxuu dhowaan gaari doonaa Spain iyo Mexico